an-trano > Travel Europe > 5 Best Day Trips mba handeha By Train From Paris
Train Travel, Fiaran-dalamby Frantsa, Travel Europe
Mieritreritra ny Hatao eny izy noho ny andro vitsivitsy? Ahoana ny planning indray andro any fitsangatsanganana nandeha lamasinina avy any Paris? frantsay fiarandalamby ireo andro fifadian-kanina, tsotra, ary eco-friendly lalana mankany mandehana any Frantsa. miaraka Save A Train, ianao ho afaka ny boky minitra ka tsy nanampy sarany, KOA! Maty!
ny Weather in Marseille lehibe Plus misy maro ny zavatra ho hahita sy hanao tao an-tanàna. Central Marseilles concentrates ny hitan'ny ankamaroan'ny tao an-tanàna, toy ny tarehy Old Port. Mahitsizoro goavana Marseille ny seranan-tsambo efa raharaham-barotra ho an'ny 2,600 taona sy kokoa ny distrika iray manontolo noho ny fahitana iray.
Toa toy ny saika ireo rehetra manana Cafe, trondro trano fisakafoanana, na hidy ao amin'ny ambany rihana, amin'ny seza ivelan'ny trano mba hahafahanao mahita ny fiainana eto amin'ity tanàna hilaza izao nivelatra rehefa hitaiza ny pastis.
Ny indostria dia nifindra hatry ny ela ny dock maoderina mankany amin'ny dock mankany amin'ny avaratra, ary ny ankamaroan 'ny sambo ao amin'ny seranan-tsambo taloha dia ho an'ny fahafinaretana.
Marseilles no misy 773 km south ny Paris. Paris ho any Marseille fitsangatsanganana nandeha lamasinina dia tena mora. Fiaran-dalamby mivantana avy any Paris mankany Marseilles dia mandao an'i Paris Gare de Lyon mandritra ny dia iray 3.5 ORA. Raha toa ianao ka nankany Marseilles amin'ny fahavaratra faran'ny herinandro dia fahazoan-dalana famandrihana tapakila ny fiaran-dalamby tsara mialoha.
Any eo amoron'ny Ony ny, Rouen dia dia lavitra andro lavitra avy any Paris ary renivohitry ny fitantanana an'i Normandy. Anaram-bosotra "ny tanànan ' 100 Bell tilikambo”. Rouen manana manan-karena tantara, tranombakoka mahaliana, ary tsara gastronomie.
ankehitriny, maro ny eny an-dalambe Rouen mbola pedestrianized, izay midika fa hoe nandeha namaky ny tanàna mahatsiaro ho tena mitovy ny hanitsaka niverina ara-potoana. tsy misy fiara, cobbled sakeli-dalana eto, ny seranana area, ary na dia ny fahagola distrika: inona no tsy ho tia? Tsidiho i Rouen mandritra ny volana Jona-septambra ary hotsaboina amin'ny jiro maimaimpoana ianao aseho ao amin'ny katedraly rehefa milentika ny masoandro ary milentika ny masoandro.
Rouen no misy 126 Km Paris. Paris ho any Rouen fitsangatsanganana nandeha lamasinina dia tena mora. Mampianatra Paris ho any Rouen veloma Garan'i Paris Saint Lazare isan'ora. Ilay dia maka 1h 15 min mba 1h 45 ahy, arakaraka ny fiaran-dalamby.
Lyon dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Frantsa, ka araka izany dia manana ny asa marobe ho tia. Fourbiere Hill tolotra Panoramika tsara tarehy hevitra tao an-tanàna, ary izany dia toerana lehibe mba manomboka ny fitsidihana. hijery Vieux Lyon, ny tanàna manan-tantara sy ny nikapoka afovoan fo, amin'ny mahaliana tamin'ny Moyen Âge sy ny Renaissance trano sy ny rivo-piainana mahafinaritra. Rehefa avy nahazo ny fanandramana ny ratsy laza Lyon nahandro, tonga ny fotoana ny loha tsy mahazo manao ny Saikinosy (Lyon ny river-mifatotra saikinosy) fa trano tsara tarehy kokoa ary ny sasany tsara fiantsenana.
Lyon no misy 463 Km Paris, ity dia avy any Paris ity dia hampahafantatra anao ny tanàna lehibe indrindra faharoa any Frantsa izay samy hafa be noho i Paris. Paris ho any Lyon fitsangatsanganana nandeha lamasinina dia fifadian-kanina. Mampianatra Paris ho any Lyon veloma Garan'i Paris lyon isan'ora ho dia ny manodidina 2 ORA, arakaraka ny fiaran-dalamby.
La Rochelle ary ny nosy dia tanàna mihoatra noho ny arivo taona nitodika ny hoavy! FIRENENA eo ao am-Atlantika seafront, ny tanàna dia niova ny base-dranomasina ho lehibe ara-toekarena, fizahantany, ary fananana ara-kolotsaina, raha foana ny hatsaran-tarehy tsy manam-paharoa.
La Rochelle no misy 469 Km Paris. Paris ho any La Rochelle dia mora ny mandeha lamasinina. Direct fiaran-dalamby TGV any La Rochelle veloma avy any Paris Gare de Montparnasse ary mampifandray Paris ho any La Rochelle in ihany 3 ORA.
Deauville dia hita ao amin'ny fari-Normandie, mifanila amin'i Trouville sy atsimo andrefan'ny Honfleur. Ny ampahany amin'ny 'Normandy Riviera' Deauville dia tanàna amoron-dranomasina mahafinaritra. Izany dia be tora-pasika, rafitra lehibe ireto, toeram-pivarotana lehibe, ary isan-taona horonan-tsary fety. Tsy lazaina intsony ny làlam-pireneny malaza, taranja golf ary koa ny casino. Inona no mety kokoa tianao?
Deauville dia mpilatsaka hofidiana mendrika amin'ny dia fitsangatsanganana iray avy any Paris, Nanomboka fiainana tahaka ny vinan'ny rahalahin'ny antsasaky ny Napoleon fahatelo. Avy amin'ny mifanila tanàna Trouville, nijery eraky ny heniheny sy dongom-boaloboka izy ary nanapa-kevitra ny hanamboatra hazakazaka. Villa tsara tarehy dia naorina teo anelanelan'ny hazakazaka sy ny ranomasina ary teraka i Deauville.
Deauville no misy 220 km west ny Paris. Paris ho any Deauville fitsangatsanganana nandeha lamasinina no tena mora. Fiarandalamby mivantana avy any Paris mankany Deauville no miala Paris Saint-Lazare horaire fiantsonan'ny fiaran-dalamby sy ny fiaran-dalamby dia maharitra 2 ORA.
Lazao Eny (Eny amin'ny teny frantsay) ho an'ny 5 fitsangatsanganana farany andro avy any Paris hitety fiaran-dalamby amin'ny fanampian'ny Save A Train! No fanampiny, saram miafina, tsy Fuss. Just mahafinaritra!
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best Day Trips mba handeha By Train From Paris” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome voninahitra fotsiny amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-travel-train-paris%2F%3Flang%3Dmg– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#andro fitsangantsanganana	#FrenchHolidays	#Pristrips	#quicktrips	#tripsfromparis	europetravel	longtrainjourneys	fiaran-dalamby soso-kevitra	Train Travel